Don Cheadle – Stars – Channel Myanmar
Avengers: Age of Ultron (2015) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။ ++++++++++++++++++++++++++++ Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan ...
Iron Man2(2010) MCU With the world now aware of his dual life as the armored superhero Iron Man, billionaire inventor Tony Stark faces pressure from the government, the press and the public to share his technology with the military. Unwilling to let go of his invention, Stark, with Pepper Potts and James 'Rhodey' Rhodes at his side, must forge new alliances – and ...
Flight(2012) Flight(2012) IMDb....7.3,,,,,Rotten....78% (Unicode) Denzel Washingtonက လယောဉျပိုငျးလော့ တဈယောကျ..... တဈရကျကတြော့ သူတာဝနျယူမောငျးနှငျတဲ့ ခရီးသညျတငျ လယောဉျဟာ စကျခြို့ယှငျးမှုဖွဈပွီး လယောဉျပကျြကပြါတော့တယျ ...ဒါပမေယျ့သူဟာ ကြှမျးကငျြမှူနဲ့ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီးစှနျ့စားမှုတှပွေုလုပျခဲ့လို့ လယောဉျဟာ အကောငျးမှနျဆုံးဆငျးသကျနိုငျခဲ့တယျ... လူအနညျးငယျသာ သဆေုံးခဲ့ရပွီး သူလညျး ပွညျသူတှအေတှကျ Heroတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ....လယောဉျပကျြကစြဉျကဒဏျရာကွောငျ့သူဆေးရုံတကျခဲ့ရတယျ ... ခငျဗြားတို့အနနေဲ့ ဇာတျလမျးတဈခုလုံးပွောလိုကျတယျလို့ထငျနလေိမျ့မယျ..အပျေါကပွောခဲ့တဲ့ဖွဈစဉျဟာ အစပိုငျး မိနဈ(၂၀)လောကျမှာပဲဖွဈသှားတာ...သူဆေးရုံကဆငျးပွီးတဲ့အခြိနျမှာ တကယျ့ဇာတျလမျးက စတော့တာပဲ ...သူ့ကို စုံခုံဖှဲ တရားရုံးတငျတော့တာပဲ...လူတှကေယျတငျနိုငျရဲ့သားနဲ့ဘာကွောငျ့တရားရုံးတငျခံရတာလဲ... သူဘာတှမြေားလုပျခဲ့လို့လဲ...သူကရော ဒီအမှုတောကွီးကနရေုနျးထှကျနိုငျပါ့မလား.. Denezl Washington ကားတှကေ သိတဲ့အတိုငျး ကားတိုငျးနီးပါးပွနျကွညျ့လညျး မရိုးနိုငျပါဘူး...သူ့ရဲ့ အရှိနျအဝါနဲ့တငျ ဇာတျအိမျမကောငျးရငျတော့ကွညျ့ရတာ ရသမွောကျနတေတျတာမြိုးပေါ့..ဒီကားက ဇာတျအိမျလညျးအတျောကောငျးပါတယျ.. ပွသခြိနျ ၂နာရီ၁၈မိနဈကို ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာကွညျ့နရေတာပါ... ဒီကားရဲ့ဒါရိုကျတာကတော့ Forrest Gump, Cast Awayတို့လိုကားမြိုးတှရေိုကျကူးတဲ့ Director Robert Zemeckisပါ ။ဆိုတော့ အမိုကျစားကားမို့ Blu-Ray 1080p 5.1 CH,720Pတို့ဖွငျ့ပွုလုပျပေးထားပွီး ခံစားကွညျ့ကွပါလို့... (zawgyi) Denzel Washingtonက လေယာဉ်ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်..... တစ်ရက်ကျတော့ သူတာဝန်ယူမောင်းနှင်တဲ့ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ဟာ စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပျက်ကျပါတော့တယ် ...ဒါပေမယ့်သူဟာ ကျွမ်းကျင်မှူနဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစွန့်စားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ လေယာဉ်ဟာ အကောင်းမွန်ဆုံးဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်... လူအနည်းငယ်သာ ...
IMDB: 7.3/10 282,899 votes
IMDB: 6.7/10 21,700 votes
Rush Hour2(2001) စုံထောကျကာတာ တရုတျနိုငျငံသို့ အလညျအပတျ ရောကျရှိနစေဉျ အမရေိကနျသံရုံးဗုံးခှဲတိုကျခိုကျ ခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျတော့ အိမျရှငျ အငျစပကျတာလီ က ဧညျ့သညျ စုံထောကျကာတာ ကို ဘယျလိုဧညျ့ခံ မလဲ ဆိုတာနဲ့ စုံထောကျကာတာရဲ့အလှဲလှဲအခြျော ခြျောလုပျရပျတှကေို တဝါးဝါး ရယျမောကွရမှာ သခြောပါတယျ။ ဗီလိနျအဖွဈ တရုတျ မငျးသမီးခြောလေး Zhang Ziyi လညျး ပါဝငျထား ပါတယျ။ ------------------------------------------------- စုံထောက်ကာတာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေစဉ် အမေရိကန်သံရုံးဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အိမ်ရှင် အင်စပက်တာလီ က ဧည့်သည် စုံထောက်ကာတာ ကို ဘယ်လိုဧည့်ခံ မလဲ ဆိုတာနဲ့ စုံထောက်ကာတာရဲ့အလွဲလွဲအချော် ချော်လုပ်ရပ်တွေကို တဝါးဝါး ရယ်မောကြရမှာ သေချာပါတယ်။ ဗီလိန်အဖြစ် တရုတ် မင်းသမီးချောလေး Zhang Ziyi လည်း ပါဝင်ထား ပါတယ်။ File Size : (774 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr ...
IMDB: 6.6/10 177,732 votes
Ocean’s Thirteen (2007) IMDb - 6.9/10 Rotten Tomatoes - 70% Al Pacino၊ George Clooney ၊ Brad Pitt ၊ Matt Damon ၊Don Cheadle ၊ Bernie Mac တို့လို နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေအပြင် တခြား နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်များစွာလဲ ပါဝင်ထားလို့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကို တစ်ချိန်တည်းမြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ၊ Ocean ဟာ Trilogy Film Series ဖြစ်တဲ့အတွက် ၃ ပိုင်းတိတိ ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Series အလိုက် Ocean 13 ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ပဲ 2007 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင်များကိုတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ Rating တွေ ပြန်တက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဆုတံဆိပ်အနေနဲ့ဆိုရင် People's Choice Awards, USA 2008 ...
IMDB: 6.9/10 285,379 votes
Ocean’s Twelve (2004) IMDb - 6.5/10 Rotten Tomatoes - 55% George Clooney ၊ Brad Pitt ၊ Matt Damon ၊Don Cheadle ၊ Bernie Mac ၊ Julia Roberts ၊ Catherine Zeta‑Jones တို့လို နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေအပြင် တခြား နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်များစွာလဲ ပါဝင်ထားလို့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကို တစ်ချိန်တည်းမြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ၊ ကဲ Ocean 11 ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ Ocean 12 ပါဗျား... 2004 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာနဲ့ ထုတ်လုပ်သူကတော့ ပထမဇာတ်လမ်းက ပုဂ္ဂိုလ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတံဆိပ် ၂ ခုနဲ့ စံကာတင်စာရင်း ၈ ခု ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Rating တွေနဲ့ ဆုပိုင်းမှာ အနည်းငယ် လျော့သွားတာကိုတော့ သတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို ...
IMDB: 6.5/10 317,387 votes
Ocean’s Eleven (2001) IMDb - 7.8/10 Rotten Tomatoes - 82% George Clooney ၊ Brad Pitt ၊ Matt Damon ၊Don Cheadle ၊ Bernie Mac ၊ Julia Roberts တို့လို နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေအပြင် တခြား နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်များစွာလဲ ပါဝင်ထားလို့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကို တစ်ချိန်တည်းမြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ၊ ဆုပေါင်း ၄ ဆု ရရှိခဲ့ပြီးတော့ အခြား ၁၈ ဆုအတွက် စံကာတင် စဉ်းစားခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ George Clooney (Dapper Dany Ocean) က ခေါင်းဆောင် နေနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ Dapper Danny Ocean (George Clooney) သူ့အပေါင်းအပါ ၁၁ ယောက် Las Vegas မှာရှိတဲ့ ကာစီနို ၃ ...
Out of Sight(1998) ဘဏ်တွေဓားပြတိုက်တာ အကြိမ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးရင် များလွန်းလို့ အရေအတွက်အတိအကျမမှတ်မိတာကြောင့် ပြန်မဖြေနိုင်ဘူး သူကတော့ ဖိုလေလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်မင်းသားချောကြီး George Clooneyဖြစ်ပါတယ် ဘဏ်ဓားပြမှုတစ်ခုကြောင့်ပဲ သူထောင်ကျခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ သူထောင်ကထွက်ပြေးတယ်....ပြေးရင်းနဲ့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုဓားစာခံလုပ်ဖို့ခေါ်သွားတယ်....ဆိုးတာက သူဓားစာခံလုပ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးက ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်..... ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အချစ်ဝတ္ထုစာအုပ်တွေငှားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အစပိုင်းနည်းနည်းဖတ်ကြည့်တယ် မင်းသားနဲ့မင်းသမီးက အစပိုင်းမှာ ရန်ဖြစ်နေရင်အာ့စာအုပ်ကိုယူလိုက်ပြီ တကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုခံယူချက်တွေပဲထားထား နောက်ဆုံး နှလုံးသားရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုတော့ မဆန့်ကျင်နိုင်ရှာဘူး ....အဲ့ဒါမျိုးတွေဆို သိပ်သဘောကျတယ် စာရေးဆရာမြသန်းတင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့နာမည်ကြီးလေရူးသုန်သုန်တောင် ဇာတ်ကောင် ၂ယောက်ရန်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေ့မှဖတ်ဖြစ်တယ် . ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလည်းဆိုတော့ မဖြေတတ်ဘူး..ခု out of sight လည်း သူတို့ ၂ယောက်ကအခြေအနေမတူ ရပ်တည်ချက်ခြင်းမတူကြဘူး ဒါပေမယ့်ဘဏ်ဓားပြကြီးက ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိမလေးကိုမှကြွေသွားတယ်..သူတို့ ၂ယောက်လည်း ရန်တွေဖြစ်ကြတယ်..ဒီကားကြည့်မိတော့ငယ်ငယ်တုန်းကရင်ခုန်သံတွေပြန်အမှတ်ရတယ် ... လတ်ဆတ်နေတုန်းပဲ...ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိမ ကလည်း JLOရဲ့လှသွေးအကြွယ်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့ လိုက်ဖက်လှတယ်.. Crime အမျိုးအစားလည်းဖြစ်လေတော့ ကြည့်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ် ကိုင်းပြိတ်သတ်ကြီးရေကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေရှိရင် ဒေါင်းကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ ဘာသာပြန်ကတော့ Sherlock ပါ..... File Size…(853MB) and (350MB) Quality…BluRay ...
IMDB: 7.0/10 75,680 votes
Swordfish (2001) Rogue agent Gabriel Shear is determined to get his mitts on $9 billion stashed inasecret Drug Enforcement Administration account. He wants the cash to fight terrorism, but lacks the computer skills necessary to hack into the government mainframe. Enter Stanley Jobson,an'er-do-well encryption expert who can log into anything. ၂၀၀၁ ထွက် အက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးမှာ လိုဂန် အဖြစ် လူသိများတဲ့ Hugh Jackman က ...
IMDB: 6.5/10 160,618 votes
Hotel Rwanda (2004) – မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီကားလေးက IMDB 8.1/10 ရရှိထားပြီး 1990 ကာလပိုင်းက ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးတစ်ခုကို အခြေခံထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် Historical Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူသားမဆန်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး အသိတရား ရရှိစေမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းမကြည့်ခင်Rwanda နိုင်ငံရဲ့ Hutu နဲ့ Tusti တွေအကြောင်း နည်းနည်းသိထားမှ ကြည့်ရတာ ပိုအသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ Rwanda နိုင်ငံကို ဘယ်လ်ဂျီယံတွေအုပ်ချုပ်စဉ်က Rwanda နိုင်ငံသားတွေကို လူမျိုးနှစ်စုခွဲခဲ့ပါတယ်။ နှာခေါင်းရှည်ရှည်နဲ့ အသားဖြူဖြူ ရုပ်သန့်သန့်ကောင်တွေကို Tusti တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးတော့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ အလုပ်တွေခန့်ပြီး နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတည်းက အခွဲခြားခံ Hutu တွေဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံအစိုးရနဲ့တစ်ပါတည်း Tusti တွေကိုပါ မုန်းတီးစိတ်ဝင်သွားကြတာပါ။ ဘယ်လ်ဂျီယံတွေ အာဏာပြန်လွှဲချိန်ကျတော့ Hutu တွေဆီ အာဏာလွှဲအပ်လိုက်ရတာနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အဖိနှိပ်ခံ Hutu တွေဟာ Tusti တွေကို အခဲမကျေဘဲ ရက်ရက်စက်စက် လက်စားချေဖို့ လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်… 1990 လို ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေ လျင်မြန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတိမထားမိအောင်ကို Hutu လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ Hutu ...
Hotel Rwanda (2004) – မြန်မာစာတန်းထိုး
Hotel For Dogs 2009 မိဘမဲ့ ကလေးလေး ၂ ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေက အိမ်မှာ ခွေးမွေးခွင့်မပြုတဲ့အတွက် လမ်းဘေးခွေးလေးတစ်ကောင်ကို ဟိုတယ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ ကယ်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆက်ပြီး ခွေးဖမ်းတဲ့ လူ ၂ ယောက်နဲ့ ရဲတွေလက်ထဲကနေ အခြားသောခွေးတွေကိုပါ ကယ်တင်ထားရင်း သူတို့လေးတွေကို အမြဲတမ်းစာအတွက် ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ်..... File Size : 700 / 350 Mb Duration : 1 : 39: 58 Quality : Bluray rip Translator : Appleseed Encoder : Littleneo CM Link VIP Link OP Link
IMDB: 5.4/10 16,757 votes